Sida loo dayactir Shaxda Barzakh aan saxnayn
> Resource > Utility > Sida loo dayactir Shaxda Barzakh aan saxnayn
Haddii diiwaanka kabaha sayidkiisa aad kombuutarka noqdo burburay hab qaar ka mid ah, sidoo kale iyada oo dhibaatooyinka download ama infakshan fayras, tani ma aha sida heshiiska weyn oo in alla inta wadid aad u adag weli waa sidoodii. Ayaa record kabaha sayidkiisa (MBR) si fudud lagu kabi karaa iyadoo lagu fulinayo hab fudud. Haddii miiska Risaalo ka xun tahay, waxaa la ciyaari doonaa xaalad jahawareer la PC.
Baaritaan PC aad u boot sayidkii u qoraan la joogo waxaa lagu booted kor, oo markaas sheegi doonaa BIOS ah oo xijaab ku wadid adag ku jira nidaamka qalliinka. Haddii MBR uu dhaawac soo gaaray nasiib daro, markaas ma noqon doonto waxan yeeli karo iyo khaladaadka soo bandhigay waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa in wax la mid ah "loading OS baadi ',' miiska xijaab aan waxba ka jirin 'ama' miiska xijaab aan waxba ka jirin".
Si aad u hagaajin miiska xijaab aan waxba ka jirin, Wondershare LiveBoot 2012 waxaa loo isticmaali karaa si loo saxo xaaladan, dayactirka record kabaha sayidkiisa si ay si sax ah u tilmaamay in ay xijaab ay ku jiraan OS ah. Waxaa jira dhowr hab-loo qeybsado dhibaatooyin MBR, laakiinse waxay idinku noqon kartaa wax adag oo xeelad badan haddii aad tahay qof aqoon u leh miisaaminta software PC. The Wondershare PowerSuite Golden si weyn nayaa hawshan, iyo ma aad yeelan doonaan in ay galaan tiro xijaab, isticmaali disc kabashada ah in dad badan oo aan haysan anfacaya xaalad walba, ama aan ka helo password maamulaha. Saxnayn miiska xijaab Windows khaladaad Windows XP si fudud loo kala soocaa karaa Wondershare LiveBoot 2012.
Wondershare LiveBoot 2012 kala sooci doonaa dhibaatooyinka ay og yahay inay dhacaan iyaga oo ku. Si fudud u gelin ka Wondershare LiveBoot CD Downlaods ama USB drive galay drive iyo guuleysatey kombiyuutarka. Nidaamka markaas reboot doonaa isticmaalaya CD / USB ah iyo qaab fudud oo kuu ogolaaneysaa in aad si uu u xaliyo dhibaatooyinka adigoo raacaya tilmaamaha.
Sida loo dayactir Atapi.sys Blue Screen Error
Sida loo Dayactir BOOTMGR waa baadida oo maqan
Sida loo xoojiso Speed ​​Computer iyo Performance
Sida loo dayactir Error Crypt32.dll
Waa maxay iyo Sida loo dayactir Error Register DLL